I-China XY-5483P yegolide yombala wensimbi ehlukanise indwangu nokwakha | IShuolong
Umbala wegolide we-XY-5483P we-Metal Fabric Divider
Isisindo: 5.6kgs / m2
Indawo yokuvula: 27.3%
Ubukhulu beMesh: 3.3mm
Ububanzi obukhulu: 4m
Ubude obukhulu: 8m
IZICELO zokwakha i-SHUOLONG mesh screen & application divider applications zinciphisa ukukhanya ngamaphesenti ahlukahlukene, kuya ngephethini lemeshini elikhethiwe, ezindaweni ezihlala njalo zesakhiwo njengomnikelo ekukhanyeni kwemini nokubukwa kwamakhredithi. Izicelo zangaphakathi zokufiphaza zivame ukuphindwe kabili njengezindlela zokwelashwa kwewindi noma ezinye izinhlobo ezihlukile zokwakheka kwangaphakathi.
Isikhathi esiholayo: 14-21 izinsuku
Ini'ngaphezulu, Uma udinga ukwengeza izinto zokwakhiwa kwemishini yensimbi kumaphrojekthi akho aqhubekayo noma azayo, sicela uxhumane nathi ngqo. Ngaphezu kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezintengo ezihamba phambili, singanikeza futhi
izinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezixazululo zokufaka zohlelo lwakho lwamaphrojekthi.
Singakunika izesekeli ezifanele ngokuya ngezidingo zakho zephrojekthi. Noma kungujantshi oqondile noma ujantshi ogobile one-curvature, uSHUOLONG angakusiza ukuthi ukubone. Ubukhulu bezinsiza esikunikeza zona okungenani bungu-2mm, futhi impilo yesevisi yinde. Uma usenemibuzo ngenqubo yokufaka, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, sizokunikeza ividiyo yokufaka eningiliziwe ukuphendula ukungabaza kwakho.
1.Isipiliyoni Seminyaka Engama-40 : Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-40 sokukhiqiza ucingo.
2.Isiqinisekiso sekhwalithi: I-oda ngalinye lihlolwe futhi lilawulwe ngokuqinile ngokuya ngezinga eliphakeme kunezinga lomhlaba jikelele.
3.Isevisi eyenziwe ngokwezifiso: Ngaphezu kwezitayela zethu ezikhona, singakwazi futhi ukwenza ngezifiso izidingo zakho zedizayini
4.Intengo ehamba phambili: Sizofanisa noma isiphi isampula noma izethulo ozinikezwe ezinye izinkampani. Ukusizakala ngesethembiso sethu somdlalo wentengo mane usithumelele ikhotheshini ebhaliwe evela kwenye inkampani futhi sizoyishaya intengo yabo okungenani nge-10%
Uma ufuna ukufaka i-oda noma udinga ukwazi imininingwane eyengeziwe yocingo lwethu lwensimbi, sicela uthumele umlayezo wakho kuwebhusayithi yethu, usishayele noma usithumelele i-imeyili. Sizokuphendula kungakapheli amahora angama-24!
Esedlule: I-XY-5127 Mesh Yezakhiwo ze-Facade CLadding (1)
Olandelayo: XY-5483 Izindwangu Zensimbi Yezingxenye
Ukwakhiwa Kocingo Lwezingcingo Olakhiwe Ngezakhiwo
Izakhiwo Mesh Indwangu
Indwangu yesikhumba ephothiwe
Indwangu Yensimbi Yokwahlukanisa Isikhala
Steel Mesh Indwangu
Indwangu Yensimbi Elukiwe
Isikrini se-XY-5875 Metal Mesh
XY-2510 Deco Metal zokwakha Mesh ngoba Cabin ...
I-XY-8914G i-Antique yethusi ehlukanise insimbi
XY-M3676 Metal Mesh ngodonga
Indwangu ye-XY-2222 Metal Mesh yeScreen Decorartive
XY-4135 Okuhlobisa Metal Screen Mesh